ETL 2835 Series 50w LED ပြောင်းမီး - Mic LED
နေအိမ်> ထုတ်ကုန်များ> ပြောင်းဖူးအလင်း LED> ETL ပြောင်းဖူးမီးခွက်စီးရီး> ETL 2835 Series 50w LED Corn Light
အိုင်ပီအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - IP40
1. နူးညံ့သိမ်မွေ့။ လှပပြီး ၃၆၀ ဒီဂရီမှောင်မိုက်သောနေရာမရှိပါ
3. Convection, စက်မှုလုပ်ငန်း - စံ။
၄။ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ ကာဗွန်နိမ့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကာကွယ်ခြင်း။
၅။ ဥာဏ်ရည်ရှိဆားကစ်၊ လုံခြုံရေးနှင့်တည်ငြိမ်မှု။
ရရှိနိုင် 7. E40 / E39 / E27 / E26 အခြေစိုက်စခန်း။
အသုံးပြု 8. အသိဉာဏ်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုယာဉ်မောင်း။
ပစ္စည်း 50w led corn light
LED အမှတ်တံဆိပ် ယူအက်စ်အေ Bridgelux LED
input ဗို့အား AC85-300V, 50-60Hz
Beam အလင်း 360 ဒီဂရီရောင်ခြည်
မီးအိမ်ပစ္စည်းများ Aluminum heat sink & Fan
Lifetime မီးအိမ် > နာရီ ၅၀၀၀၀
အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 0.41
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား (mm) Dia94x220
အထုပ်အရွယ်အစား (mm) 540*368*403
လျှောက်လွှာ ပန်းခြံအလင်း၊ လမ်းမီး၊ ဥယျာဉ်အလင်း၊ ရုံးမီး၊ ဂိုဒေါင်အလင်းရောင်စသည်